Ahịhịa nwere 30% mmetụta na mmiri ozuzo | Network Meteorology
Ahịhịa dị na gburugburu ebe obibi nwere ọrụ dịgasị iche iche, dịka ichebe ihe niile dị ndụ na-adabere na ya na inye nri. Ha na-ewepụkwa ikuku oxygen anyị na-ekuru site na usoro nke photosynthesis.
Ugbu a, ọbụlagodi mkpa, Achọpụtawo ahịhịa nwere mmetụta dị ukwuu na ihu igwe. Kedu ka ihu igwe nwere ike isi metụta ihe ọkụkụ dị?
Ihu igwe na ahịhịa
Ntaifiọk emi ẹdụn̄ọrede n̄kpọntịbe emi ẹmek utịn̄ikọ oro odude ke ufọt ikpa ye ikọn̄. Nzaghachi ndị a nwere mmetụta dị ukwuu na mmiri ozuzo na nsogbu nke radieshon n'elu ma, ya mere, na-enwe mmetụta na ihu igwe nke ebe ahụ. Ahịhịa na-akpata 30% nke mgbanwe na ọdịda na radieshon na-efe n'elu.
Ọmụmụ ihe ndị a nwere ike inye aka melite amụma ihu igwe, ebe ọ bụ na ịmara ahịhịa nke mpaghara na mmetụta ya nwere ike ịmepụta ụdị dị mma maka ịkọ ọnọdụ okpomọkụ na mmiri ozuzo. Ihe omumu a bu, dika ndi dere ya si mara, onye izizi iji nyochaa ihe omimi nke ikuku na mbara igwe site na iji data nyocha, ma ọ nwere ike melite ihu igwe na amụma ihu igwe dị mkpa maka njikwa ihe ubi, nchekwa nri, inye mmiri, ụkọ mmiri na ebili mmiri.
Anyị maara na ahịhịa nwere ike imetụta ọnọdụ ihu igwe na ihu igwe site na ịtọhapụ alụlụ mmiri n'oge usoro photosynthesis. Ntọhapụ nke ikuku mmiri a n'ime ikuku na-agbanwe ike ike nke elu ma na-akwalite nhazi igwe ojii. Ekele maka igwe ojii ndị ahụ, mmiri ozuzo na-amalite. Ya mere ahịhịa dị mkpa maka ọchịchị mmiri ozuzo iji kwụsie ike.
Ọzọkwa, igwe ojii na-agbanwezi oke nke ìhè anyanwụ, ma ọ bụ radieshon, nke nwere ike iru elu ụwa, na-emetụta ike ume nke ụwa, na n'akụkụ ụfọdụ nke a nwere ike iduga mmiri ozuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ahịhịa nwere 30% mmetụta na mmiri ozuzo